Bitcoin Offshore Account ka manaiky ny Cryptocurrency
Bitcoin Offshore Account Account
Mafana sy lohahevitra trending be i Bitcoin sy ny hafa cryptocurrency. Na izany aza, betsaka ny fampahalalana mitsingevana manodidina izay mety hahatonga azy hampiasa Bitcoin toa mampisafotofoto. Raha ny tena izy dia tena tsotra ny fampiasana Bitcoin. Tahaka ny mijery fahitalavitra, tsy mila mahatakatra ny fahasarotan'ny asan'ny fahitalavitra mba hahafahana mampiasa azy io.
Rehefa manana Bitcoin ianao dia mety te-hiditra amin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana. Rehefa izany dia tsy ny rehetra, ary indrindra tsy ny rehetra bank accept Bitcoin. Ankoatra izany, azonao atao ny manome toky momba ny fiainana manokana sy ny tsy fananana anarana hoe vola nomerika. Mba hahatratrarana izany, dia maro no mitady vahaolana crypto na Bitcoin kaonty banky offshore. Amin'ny teny hafa dia maniry toerana hitahirizana ny e-mataony izy ireo ankoatra ny fampiharana amin'ny telefaona finday; na toerana hamadihana azy ho vola ary apetraka any ivelany any amin'ny alàlan'ny fanararaotana offshore bank.
Ho an'ny valiny fohy, afaka manana fifampiresahana amin'ny matihanina za-draharaha ianao amin'ny fampiasana ny nomeraon-telefaona na ny fangatahana fanadihadiana eto amin'ity pejy ity. Manana kaonty any amin'ny banky any amin'ny banky afaka mahazo ny Bitcoin sy ny hafainganam-pandehanana hafa. Mandritra izany, mamaky bebe kokoa amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Inona ny Bitcoin?
Voalohany, inona ny Bitcoin? Bitcoin dia vola izay noforonina tao 2009. Izy io dia endrika iray amin'ny fifanakalozana matihanina dizitaly. Izy io dia ahafahan'ny mpampiasa mandoa vola haingana any amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Mihazakazaka tsy misy régime tengah i Bitcoin. Raha tokony hatao, mampiasa teknolojian'ny peer-to-peer i Bitcoin. Ny tamba-jotra Bitcoin dia manatanteraka ny fitantanana orinasa sy famoam-bola. Satoshi Nakamoto namorona voalohany tany Bitcoin. Mino izahay fa alim-by izay nampiasain'ny tompon-toerana. Ny besinimaro dia tsy mahalala ny tena anarany ilay olona na olona namorona an'i Bitcoin. Bitcoin dia navotsotra tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana MIT.
Bitcoin dia azo ampiasaina mba hividy sy hivarotra zavatra sy serivisy amin'ny fomba fanao mahazatra. Ireo mpampiasa dia afaka mividy pizza, karatra Amazon, ary zavatra hafa mahazatra toy ny vola sy carte de crédit. Rehefa mieritreritra ny fomba fiasan'ny Bitcoin, dia mora ny mampitaha ny Bitcoin amin'ny fampiasana karatra debit. Raha mampiasa ny rafitry ny banky an-tserasera ny tompon'ny kaonty amin'ny banky, dia mahazo ny doka nomerika izy ireo. Ireo tompon'ny kaontin'ny banky dia afaka mampiasa ny rafitra an-tserasera mba handefasana sy handraisana ny famindrana mivantana. Ireo fifindrana amin'ny fifindrana dia maneho ny sandan'ny vola izay azo alaina amin'ny vola taratasy. Toy izany koa no azo atao amin'ny Bitcoin. Bitcoin dia azo alaina ho an'ny dolara Amerikana, Euro, na karazana vola hafa. Azo atao ihany koa ny mivarotra mivantana ny entana na ny serivisy.
Tsy toy ny banky anefa, ny fifampiraharahana natao tamin'ny Bitcoin dia natao tsy misy mpanelanelana. Fanampin'izany, tsy misy saram-pandraharahana mifandraika amin'ny Bitcoin. Bitcoin ihany koa dia tsy manana fepetra fampahafantarana. Mihamaro hatrany ny mpividy dia manaiky ny Bitcoin sy ny endri-tsolika hafa. Bitcoin tsy ny hany vola nomerika amin'ny aterineto. Misy ihany koa ethereum, Litecoin, ary ny hafa. Bitcoin no malaza sy be mpampiasa indrindra.
Ahoana ny fiasan'ny Bitcoin?
Tena mora ny manomboka mampiasa Bitcoin. Ny dingana voalohany dia ny fampiasana finday smartphone ary mandefa fampiharana izay mamela ny mpampiasa mividy na aloa amin'ny Bitcoin. Ireo fampiharana ireo dia matetika antsoina hoe bootey Bitcoin. Ny fampihatra malaza indrindra dia antsoina hoe Coinbase. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana ao amin'ny app raha hampifandray ny kaonty banky na karatra debitina amin'ny app. Ny anaran'ny banky amin'ny anaran'ny banky amin'ny aterineto sy ny tenimia dia mampifandray ny laharan'ny banky. Ny fanamarinana ny fametrahana kely izay vita mandritra ny iray na telo andro dia afaka mampifandray izany koa.
Ny balan'ny Bitcoin dia voarakitra ao amin'ny fantatra amin'ny hoe blockchain. Ny kitapo fitaratra dia mizara ho an'ny daholobe. Ny tambajotran'ny Bitcoin dia miankina amin'ny kitay. Ny trosa rehetra voamarina dia tafiditra ao amin'ny bokotra. Amin'izany fomba izany, ny bootset Bitcoin dia afaka manombatombana ny balan'ny fandoavam-bola. Ny fifanakalozana vaovao dia azo hamarinina mba hahazoana antoka fa ny bitcoins mandany dia tena tompon'antoka amin'ny mpaninjara. Ny tsy fivadihana sy ny lamin'ny fandehan'ny sisin-tany dia tsy azo antoka. Ampiharina amin'ny alàlan'ny cryptography izy ireo mba hitazonana ny tsiambaratelon'ny mpisera Bitcoin.
Ny transakta bitcoin dia fiovan'ny sandan'ny Bitcoin. Ireo raharaham-barotra ireo dia voarakitra ao amin'ny kitapo. Ny bootera Bitcoin dia mitazona singa miafina antsoina hoe a private key na voa. Ireo rakitra ireo dia ampiasaina hanasonia fifanakalozana. Ity sonia ity dia miasa ho porofo matematika fa avy amin'ny tompon'ny birao Bitcoin mety izy ireo. The sonia dia ampiasaina ihany koa mba hisorohana ny fifanakalozana tsy hohadinoina na oviana na oviana rehefa navoaka. Ny fe-potoana fanamafisana manaraka ny fividianana Bitcoin dia fohy. Ny fifampiraharahana rehetra dia alefa eo amin'ny mpampiasa. Matetika izy ireo no manamarina azy ireny ao anatin'ny 10 minitra.
Sarotra be ny mividy Bitcoin. Mba hividianana Bitcoin, ny mpampiasa tsotra fotsiny dia manindry ny bokotra fividianana amin'ny fampiharana izay ampiasainy ho toy ny kitapo Bitcoin. Ny kaonty amin'ny banky dia efa mifandray amin'ny app, ka tsy mila averina vaovao intsony. Avy eo dia miditra ny habetsany izay tiany hividy azy. Farany, ny mpanjifa dia miantso ny mividy ary vita ny varotra. Izany dia tsotra.
Miantso fivarotana nomerika isika, toy ny fampiharana smartphone izay ahafahan'ny olona mandany vola nentin-drazana ho an'ny Bitcoin ary mifanohitra amin'ny Bitcoin fifanakalozana. Ny sehatra toy izany dia manome fomba ahafahan'ny olona mandany vola dizitaly ho an'ny dolara, euros, yen, sns.
Ampiasao ny fampiharana Coinbase handoa na handoa vola
Bitcoin dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana kitapo Bitcoin, toy ny Coinbase. Ao amin'ny fampiharana Coinbase, misy mari-pamantarana QR code izay azo ampiasaina mba hamoronana kaody elektronika mba handoavana ny bitcoin. Ny mpandray ny fikasana dia manohina ny icon ary misy QR code. Ny mpampiasa dia afaka mizara ny code QR, ny tady misy ny tarehimarika na ny adiresy mailaka mifanaraka amin'ny lahatsoratra miaraka amin'ilay iray izay manao ny fandoavana.
Ahoana no fomba handoavam-bola amin'ny Bitcoin mampiasa Coinbase
Ny fividianana dia mora. Ireo no torolàlana momba ity soratra ity. Raha niova ny fampiharana hatramin'ny nanoratana ity, dia mety ho hafa ny torolàlana sasany.
Fanteno ny takelaka "Accounts" mankany amin'ny farany ambany amin'ny fampiasa Coinbase
Safidio ny kitapo Bitcoin (BTC).
Fanteno ny mari-pamantarana QR code ao amin'ny zoro havanana amin'ny rindrambaiko.
Misafidiana "asehoy ny adiresy"
Tsindrio ny "Mizara" amin'ny lahatsoratra na alefaso ny adiresinao Bitcoin na "Adiresy kopy" mba hahafahanao mametaka fotsiny ny adiresy Bitcoin ao anaty lahatsoratra na mailaka.
Rehefa avy nizara ny adiresinao Bitcoin ianao amin'ny olona iray mandoa anao, dia azony atao ny manaraka ny torolàlana eto ambany ny "Ahoana no handoavana ny hafa ...".
Ahoana no handoavana ny olona iray amin'ny Bitcoin mampiasa vola madinika
Mba hahafahana mandefa Paycoin amin'ny olon-kafa, ny mpampiasa dia afaka mangataka amin'ilay lahatsoratra mpaninjara na mandefa mailaka ny nomeraon'ny Bitcoin.
Ny iray manao ny fandoavam-bola dia avy eo dia kitihina eo amin'ny sehatr'ity kaonty ity.
Misafidiana iray ny kitapo Bitcoin (na ny vola hafa).
Dia afeno eo amin'ny sehatra havia havanana amin'ny app Coinbase ny sary.
Soraty amin'ny pejy manaraka ny vola.
Amin'ity pejy manaraka ity, kopio ary apetaho ny isa misy ny kaonty na adiresy mailaka mifandraika amin'ny rindrambaiko Coinbase. Ampidiro ny fanamarinana sandoka.
Kitiho manaraka. Dia ajanòny ny fandoavana.
Izany dia miasa amin'ny fomba toy izany amin'ny fanaovana famindrana vy amin'ny fampiasam-bola amin'ny fomba mahazatra.
Miha lasa malaza i Bitcoin satria manome tombony betsaka amin'ny mpampiasa noho ny vola mahazatra. Ho an'ny iray, azonao atao ny mampiasa Bitcoin mba hanaovana fividianana miafina. Ho an'ny iray hafa dia tsy mitaky karatra ID i Bitcoin. Izany dia mahatonga azy ho vola tsara ho an'ny olona izay tsy te-hijanona ho tsy mitonona anarana. Mety ihany koa ho an'ny mahatsiaro ho an'ny fiainana manokana na any amin'ireo faritra manana fotodrafitrasa tsy ampy taona.
Ny rindrambaiko Bitcoin dia voahodinkodina tanteraka. Vokatr'izany dia tsy fahita firy ny raharaha hacked amin'ny Bitcoin. Saika ny raharaha momba ny hacking efa nisy dia nitranga rehefa tsy niraharaha ny tenimiafina ao amin'ny kaontiny nomerika ilay olona nanana Bitcoin. Raha mbola voaro ny tenimiafina, Bitcoin dia manolotra fiarovana bebe kokoa noho ny vola mahazatra.
Ho mora kokoa raha ny mpangalatra mangalatra vola itehirizana ao an-tokantrano toy izay ho azy ireo no mangalatra an'i Bitcoin tsy misy ny tenimiafina. Ny vatan-tsoratra izay mirakitra ireo mpividy sy mpivarotra an'i Bitcoin dia tsy mbola nambara. Ireo IDs poketra misy mpampiasa Bitcoin no aseho. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mitazona tsiambaratelo hentitra nefa manao koa ny fividianana sy ny varotra mora. Ny fampiasana Bitcoin dia ara-dalàna tanteraka. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fomba fitantanana ara-dalàna amin'ny fomba mitovy amin'ny alàlan'ny fampiasana vola sy carte de crédit.
Tsy misy fetra i Bitcoin ary tsy mila fahazoan-dàlana amin'ny fampiasana. Raha ny voasoratra dia tsy fehezin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao izy io. Mety hiova izany. Ny sandam-bola dia miaro amin'ny sivana satria tsy misy olona afaka manakana na manafaka fifanakalozana vola. Ny fandoavam-bola iraisam-pirenena dia mora atao amin'ny Bitcoin ihany koa satria ny vola tsy mifatotra amin'ny sehatra manokana.
Vokatr'izay dia tsy tapaka ny vidin'ny fiovam-bola. Ny fampiasana Bitcoin dia manafoana ny saram-bola hafa izay mahazatra amin'ny fifanakalozana ara-bola, toy ny saram-bola karatra. Ny olona sasany mividy Bitcoin amin'ny fampiasam-bola. Manao izany izy ireo amin'ny fanantenana fa hampitombo ny lanjan'i Bitcoin mandritra ny taona maro. Ny tantara farany teo amin'ny sandam-bola dia mampiseho fa mitohy ny fanombohana ny tombana, fa ny Bitcoin mety na tsy mety mahomby amin'ny fampiasambola. Na dia efa nahita fitombo mahery vaika aza isika tamin'ny lasa, tsy azo antoka fa hitranga amin'ny hoavy.
Ny tombantomban'ny vola dia mety ho tsy azo antoka loatra. Amin'izany fomba izany, ny fanombantombana ny tombam-bidy amin'ny Bitcoin dia tsy mitovy amin'ny fanombatombanana amin'ny vola mahazatra mahazatra. Tsotra, Bitcoin dia fomba hividianana zavatra. Ny fomba fiakarany dia raha misy olon-kafa miaraka aminao izay vonona handoa mihoatra noho ny volanao.
Ny tombontsoa voalohany amin'ny Bitcoin dia tsy mandanjalanja toy ny fampiasam-bola, fa amin'ny fiainana manokana izay omeny. Satria tsy voatery manoratra ny anarany ny mpampiasa Bitcoin, dia tsy mitonona anarana ny fifanakalozana. Bitcoins dia tsy azo pirinty na tsy misy dikany. Ny Bitmins ho an'ny 21 fotsiny dia tsy hisy intsony. Tsy manana tahirin-tsakafo izy ireo ary tsy manangona toerana malalaka. Ho vokany dia mety ho ny vola iraisam-pirenena vaovao i Bitcoin.
Bitcoin dia tsy hampihena ny ilàna ny fiaramanidina ara-dalàna ho an'ny fiarovana amin'ny fiarovana. Raha ny marina, marina ny mifanohitra amin'izany. Ny fampiasana orinasa orinasa an-dranomasina dia mety hampitombo ny fiainana manokana sy fiarovana azo avy amin'ny fampiasana Bitcoin.
Azo atao ny mampitombo ny tsiambaratelo omena amin'ny alalan'ny fampiasana Bitcoin amin'ny fisoratana anarana ny kaonty nomerika miaraka amin'ny Bitcoin amin'ny orinasa iray any ivelany. Izany dia mamorona sehatra fisarahana fanampiny eo amin'ny Bitcoin sy ny tompony. Vokatr'izany, io fomba fiasa io dia tena manan-danja amin'ny fiarovana amin'ny fiarovana. Ny fiarovana tsara indrindra ho an'ny Bitcoin dia azo raisina amin'ny alalan'ny fampiasana orinasa afrikana.
Ny orinasa Offshore dia manome fiarovana tsara indrindra ho an'i Bitcoin satria any amin'ny firenena toa an'i Nevis, Belize sy ny nosy Cook, tsy iharan'ny fitsarana any an-toerana izy ireo. Vokatr'izany, raha misy didim-pitsarana amin'ny olona any Etazonia, ny mpitrandraka olona dia hanana fe-potoana hibaiko ny fanangonana an'i Bitcoin izay voatazona ao amin'ny kaonty voasoratra anarana ho an'ny orinasa iray. Tianao hovakina bebe kokoa momba ny Bitcoin banky offshore? Azonao atao ny mampiasa ny tarehimarika na ny fangatahana fanadihadiana ao amin'ity pejy ity mba hananana fifampiresahana amin'ny matihanina matihanina.
<Ho an'ny toko 12